Boosaaso: Barashada Farsamada Gacanta (Warbixin) – Radio Daljir
Maarso 20, 2021 4:27 g 5
Soomaaliya oo tirada dadkeeda lagu qiyaaso boqolkiba 70 in ka badan iney yihiin dhalinyaro ayaa shaqo la’aan ah, taasoo dhaxalsiisay iney tahriibaan, qaarna ay ku biiraan kooxaha xag jirka ah iyo burcad badeedda.
Farsamada gacanta waa waxa kaliya oo ay wadamo badan ku horumareen dhalinyaradooduna ay ka heleen shaqo’abuur tusaale ahaan sida dalalka Shiinaha iyo Jabbaan.
Waa xirfad qofkii barta uu muddo kooban ku samayn karo shaqo.
Hadaba magaalada Boosaaso waxaa ka furan Machadka Farsamada Gacanta oo lagu barto xirafado kaladuwan wariyaha Daljir ee Boosaaso Deeqo ladan ayaa warbixintan ka diyaarisay
PUNSAA oo Xukunka Wariye Kilwe ku Sheegtay Mid aan Sharci Sax ah loo Marin
mukhtaar dahir 4 months ago
Wan.doonYa ima.laga cawiyo.fraamd.lydhka.
Oo.ada iyo adaa ain.igu
Kayze abdirizak 8 months ago
Kayze abdirazak 8 months ago
Saalax 8 months ago
Waxaan doonayaa inan barto
Laydhka iyo waxyaabaha uu ukala baxo